ဘို့ ချန်းရထား ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
၆၇ နှစ်ကြာ ပြေးဆွဲခဲ့တဲ့ ရေနွေးငွေ့ စက်ခေါင်းတွဲ ( SL ) နှင့် အဲဒီ SL က ဆွဲခင်ခဲ့တဲ့ ရထားတွဲကို နဂိုအတိုင်းထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေပါ။ မာစွတ်မြို့တွင်းကို ပြေးဆွဲပြီး ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို မျက်စိပသာဒဖြစ်စေပါတယ်။ နာစွတ်စိုးဆဲခိဝတ္ထု ( ဘို့ ချန် ) မှာ မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ဇာတ်ကောင်က စီးခဲ့တာကို အစွဲပြုပြီး ဒီနာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Ehimekenmatsuyamashi Dōgo-chō 1 (dōgoonsen'eki)
လူကြီး ၅၀၀ ယန်း ကလေး ၂၅၀ ယန်း
၉း၀၀ မှ ၁၆း၀၀ ( အချိန်ဇယားမှာ သေချာအတည်ပြုပါ )
အိယောတဲစွတ်ဒိုးဂျောနန်းလိုင်း ( ဒိုးဂေါအွန်းဆမ်းဘူတာ ) က နောက်ဆုံးဆိုက်ရောက်ဘူတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘို့ ချန်းရထားတွဲရဲ့ စက်ခေါင်းတွဲ ဦးတည်ရာပြောင်းတာတွေကို မြင်နိုင်တယ်။
Iyo tetsudō `'(dōgoonsenဘူတာ ) . (Ōkaidō-ဘူတာ ) . ( matsuyamashiဘူတာာ ) . (komachi ) . JR ( matsuဘူတာ ) မှ စီးနိုင်တယ်။
ပြည်တွင်းတွင် ၁၂ သာရှိသော၊ အဲးဒိုခေတ်မတိုင်ခင်တွ...